काठमाडौ जेठ २०
नेपाली चलचित्र जगतमा उमेश खड्का नौलो नाम होईन । लामो समय देखी चलचित्र क्षेत्रमा समय विताईरहेको खड्का हालै मात्र चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को केन्द्रिय सदस्यमा मनोनित भएका छन् । खड्का विगत १६ वर्ष देखी चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । उनलाई चलचित्रमा खलनायकको भुमिकामा प्रायः देखिन्छ । उनलाई नायक बनेर चलचित्र क्षेत्रमा जम्न मन थियो रे ! तर उनलाई साथीभाई र निर्माताले खलनायकमा जम्छन् भनेर फुरुक्क पारेछन् । त्यसपछि उनी त्यतै लागेछन् । उनी भन्छन् ‘ नायक बन्ने रहर पनि थियो तर सबै साथीभाइहरुले तँ त खलनायकमा जम्छस् भन्थे । निर्माता निर्देशकहरुले पनि खलनायकका राम्रो हुन्छ, भन्नुुहुुुन्थ्यो । त्यसैले यो विधा रोजेँ र आज धेरै सफल पनि भएको छुु । लगातार काम पनि गरिरहेको छुु । ’ उनै खड्कासंग सेन्सरबोर्ड र चलचित्र क्षेत्रका बारेमा रहेर हामीले सक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ ।
सर्वप्रथम सेन्सर बोर्डमा नियुुक्त हुनुुभएकोमा बधाई छ, अहिले केमा व्यस्त हुुनुुहुुन्छ ?
सर्वप्रथम धन्यवाद, हाल म सेन्सर बोर्डमा नै निकै व्यस्त छुु । नेपाली, हिन्दी, अंग्रेजी भाषाका चलचित्रहरु सेन्सर गर्दैमा फुुर्सद छैन । फुुर्सद भएको समय चलचित्रमा दिएको छुु ।
कुन चलचित्रमा काम गर्दै हुुुुनुुहुुन्छ ?
एकलव्य र कसुुर सकाएर पोष्ट प्रोडक्सनको काममा रहेका छन् भने अन्य कादम्बिनी र अवतारमा व्यस्त छुु । अरु चलचित्रमा पनि कुरा भइरहेको छ ।
सेन्सर बोर्डमा काम गर्न कत्तिको सजिलो वा गाह्रो छ ?
सजिलो गाह्रो दुुवै हुुन्छ । जस्तो काम आए पनि गर्न परिहाल्छ । हामी सेन्सरको टिम हौं । सजिलो गह्रो जस्तो आए पनि एक आपसमा सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छौं । सेन्सर बोर्डमा बसिसकेपछि समस्या समाधान त जसरी पनि गर्नुुप¥यो नि होइन र ?
कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्नुुभएको कति भयो ?
यस क्षेत्रमा लागेको झण्डै १६ वर्ष जति भयो । सानैदेखि कलाकार बन्छुु भन्ने सोच थियो । त्यही सोचका आधारमा काम गर्दै जाँदा अहिले यहाँसम्म आएको छुु ।
यतिका समय चलचित्र क्षेत्रमा समय दिनुुभएको रहेछ, यसबाट के पाउनुुभयो ?
धेरै कुराहरु पाएँ । इज्जत, नाम, दाम र प्रतिष्ठा पाएँ । जुुन कुुराहरु पैसाले किन्न पाइँदैन । देशको हरेक ठाउँमा जाँदा सबैले चिन्छन्, बोलाउँछन, मानसम्मान गर्छन् । यो नै काफी छैन र ? एउटा कलाकारको लागि ।
पहिलेदेखि नै खलनायक बन्ने रहर हो ?
नायक बन्ने रहर पनि थियो तर सबै साथीभाइहरुले तँ त खलनायकमा जम्छस् भन्थे । निर्माता निर्देशकहरुले पनि खलनायकका राम्रो हुन्छ, भन्नुुहुुुन्थ्यो । त्यसैले यो विधा रोजेँ र आज धेरै सफल पनि भएको छुु । लगातार काम पनि गरिरहेको छुु ।
नायकमा जम्न नसकेर खलपात्रतिर लागेको त होइन नि ?
होेइन, होइन मैले सुरुदेखि नै खलनायक भएर काम गरेँ र सफल पनि भएँ । मैले माया नमारमा खलनायक भएर काम गरेदेखि पछाडि फर्केर हेर्नुु परेको छैन र अहिले पनि म खलपात्रमा नै काम गर्न रुचाउँछुु ।
दर्शकमाझ पुुग्दा तपाईंलाई कसरी चिन्छन् ?
दर्शकमाझ पुुग्दा खलपात्रमा नै अभिनय गर्ने भनेर चिन्छन् । एउटा खलपात्रले समाजमा भएका विकृतिलाई उजार गर्छ । आखिर मैले समाजमा कस्ता विकृतिहरु छन् भनी खलपात्रको रुपमा चलचित्रको माध्यमबाट सन्देश दिने न हो । पछि नायकले आएर त्यो विकृतिलाई सफा गर्ने त हो नि ।
तपार्इंलाई काम गर्न सजिलो लाग्ने कलाकारहरु कोको हुुन् ?
प्रायः सबैसँग सजिलो लाग्छ । राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्ट, सञ्चिता लुुर्इंटेल, आयुुष रिजाल, रेजिना उप्रेती, शिव श्रेष्ठ, रमित ढुुंगाना सबै सरल, सजिलो र फ्रेन्ड्ली हुुनुुहुन्छ ।
संख्यात्मकरुपमा अहिलेसम्म कतिवटा चलचित्रमा अभिनय गर्नुुभयो ?
ठ्याक्कै त भन्न गाह्रो होला । त्यस्तै ६०, ६५ वटा जति नेपाली चलचित्रमा, ८—१० वटा जति टेलिफिल्ममा अनि ५—६ वटा जति भोजपुुरी चलचित्रमा काम गरेको छुु ।
आफ्नो जीवनमा आफूले गरेको भूमिका सम्झदा कस्तो लाग्छ ?
कुुनै कुुनै अलि अघिको चलचित्र हेर्दा केही नपुुगेको जस्तो लाग्छ । तर अहिलेकोमा सबै राम्रो गरेको छुु भन्छन् । मलाई पनि ठिकै लाग्छ ।
पहिले र अहिलेको चलचित्रमा के भिन्नता पाउनुुहुन्छ ?
काम पहिले पनि उही नै हो, अहिले पनि उही नै हो । तर प्रविधि फेरिएको छ । अहिले डिजिटल युुग छ । गल्ती गरेमा तुुरुन्तै सच्याउन पाइन्छ । पहिले यस्तो प्रविधि थिएन ।
तपाईंले धेरै चलचित्रमा बलात्कारको दृश्य गर्नुभएको छ, अप्ठेरो लाग्दैन ?
अप्ठेरो लाग्छ नि, किन नलाग्नुु । यस्तो दृश्य नभएको भए हुुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । तर, समाजमा घटेको घटनालाई मेरो चरित्रमार्फत दर्शकसामुु ल्याएको मात्र हो , त्यो पनि समाजलाई सचेत गराउन ।
अन्त्यमा दर्शकहरुलाई केही भन्नुु छ ?
हामी चलचित्रका कलाकारहरु चलचित्रमा जस्तो भूमिका दियो त्यही गर्ने हो । यसलाई वास्तविकता नसोच्नुु होला र हामीलाई माया गर्नुुहोस् भन्न चाहन्छुु । अन्तमा नेपाली फिल्मलाई माया गर्नुुहोस् र राम्रो सुुझाव दिनुुहोस् भन्न चाहन्छु ।